တကယ်လွတ်တာ ဟုတ် ရဲ့လား ကွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » တကယ်လွတ်တာ ဟုတ် ရဲ့လား ကွာ
တကယ်လွတ်တာ ဟုတ် ရဲ့လား ကွာ
Posted by ကြယ်လေး on Nov 16, 2010 in Aung San/Aung San Suu Kyi |5comments
ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေ ဟိုပြောဒီပြော … ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေကြချိန်မှာ … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်လာတယ် . .. ပြည်သူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုတွေ က ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆီကို အစုလိုက် အပြုံလိုက်ရောက်သွား တယ်… ဘယ်သူမှ အဲဒီ အကြောင်းပြောသံမကြားရတော့ဘူး … ဒီကိစ္စက တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခု မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်မိတယ် … ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိတဲ့ ခံစားမှု သက်သက်ပါပဲ …. တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်တဲ့ တိုက်ဆိုင်သယောင်ယောင် ပြဿနာ တစ်ခုဆိုရင်လည်း … အခု ကျွန်တော် တို့တွေ့နေရတဲ့ မျက်နှာတွေ ဟာ မျက်နှာဖုံးတွေပဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်…. ။ တကယ် မူရင်းမျက်နှာ နဲ့ ရလာဒ်တွေက နောက်မှာ ဖြစ်လိမယ့်မယ်။ နောက်ထပ် ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းက တော့ မျက်နှာဖုံးကို တတ်နိုင်သလောက်ပြုံးနေဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ် . . . အကြီးမားဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် အတွက် သချိင်္ုင်းကုန်း နဲ့ နေအိမ် ဘယ်မှာ နေမလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ ပဲ ရမယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ် . . . မြန်မာပြည်ရဲ့ အတွင်ကျယ်ဆုံးစကားလုံးလိုပေါ့ … ဘာမှမဖြစ်ရင် .. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး တဲ့ … ဟုတ် ပါတယ် အခု လဲ ဒီလိုပါပဲ … အဲ … ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ လည်း … ဘာမှ လုပ်လို့ကို မရတော့ဘူး …. တစ်ခု စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ က မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ပြည်သူကို ချစ်ပြီး ပြည်သူက ချစ်တဲ့ သူရဲကောင်း တွေဟာ အသေစော ကြတာပါပဲ . . . ။ မြန်မာ ကို မြန်မာ ချင်း သတ်ဖြတ် ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ … လေးစားစွာဖြင့် နေစိုးနိုင် Facebook မှာ အကိုတယောက် ရေးထားတာပါ အားလုံး သတိ ချပ်စေချင်လို့ကူးလာပါတယ်
ဒီပွဲက ပြီးတော့မှကိုး ဖြစ်ပါတော့မည်..။ မြန်မာပြည်တွင်းက ဘုရားရဲ့သား၊ စစ်သား၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနဲ့ တိုင်းရင်းသား၊ လုပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ အသက်တွေကို စတေးနေရတာတွေ များနေပါပြီ..။
ကြယ်လေး….ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်တာလွတ်ရက်စေ့လို့လွတ်တာတော့အမှန်ဘဲ ဒါပေမဲ့အဏာရူးလူတစုကိုတော့သတိထားရလိပ်မယ်။ တချိန်တုန်းကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပြည်သူအများက လေးစားချစ်ခင်ကြပေမဲ့အာဏာရူးဂဠုန်ဦးစေားကဗဟုသုတနည်းပါးတဲ့နယ်ကလူတွေကို စည်းရုံးပြီးဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုလုပ်ကြံခဲ့ကြတယ်။ ခုလဲကြည့်တိုင်းပြည်ကိုသူတို့မင်းသူတို့ချင်းလုပ်ချင်တိုင်းလုပ် တန်သည်မတန်သည်မစဉ်းစားကိုယ့်ကိုအာဏာမြဲဘို့ကာကွယ်ပေးသူမှန်ယင်သူပေးတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်း အ လ ကား ယူလဲရတယ် နယ်စပ်မှာဆို ကျွန်းနဲ့သစ်မာကြုံတဲ့သူကလက်ညှိုးထိုးရောင်း ရောင်းစားတဲ့သူသာငွေရတာပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်လါဘူး ဒီလေါက်အချောင်ရနေတဲ့အာဏာရူးလူတစုကတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့သူ ဘယ်သူမဆိုအမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်မယ်နောက်ဆုံးလုပ်ကြံဘို့လဲဝန်လေးမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်ဒီလိုမသမာလူတစုမကောင်းမှု့အကြံအစည်မှန်သမျှသိရှိခဲ့ယင်သက်ဆိုင်သူများသို့အလျှင်အမြန်အသိပေးကြပါကာကွယ်ကြပါ…..ဒီအချိန်သည်အဏာရူးလူတစုကောင်းစားရေးမကူညီသင့်တော့ပါအားလုံးသောပြည်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နောင်မျိုးဆက်သစ်များကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝိုင်းဝန်းအကာအကွယ်ပေးကြပါလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်…အားလုံးညီညွတ်ကြရအောင်
ကြယ်လေး….ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်တာလွတ်ရက်စေ့လို့လွတ်တာတော့ အမှန်ဘဲ ဒါပေမဲ့အဏာရူးလူတစုကိုတော့သတိထားရလိပ်မယ်။ တချိန်တုန်းကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြည်သူအများက လေးစားချစ်ခင်ကြပေမဲ့အာဏာရူးဂဠုန်ဦးစေားက ဗဟုသုတနည်းပါးတဲ့နယ်ကလူတွေကို စည်းရုံးပြီးဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုလုပ်ကြံခဲ့ကြတယ်။ ခုလဲကြည့်တိုင်းပြည်ကိုသူတို့မင်းသူတို့ချင်းလုပ်ချင်တိုင်းလုပ် တန်သည်မတန်သည်မစဉ်းစားကိုယ့်ကိုအာဏာမြဲဘို့ကာကွယ်ပေးသူ မှန်ယင်သူပေးတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်း အ လ ကား ယူလဲရတယ် နယ်စပ်မှာဆို ကျွန်းနဲ့သစ်မာကြုံတဲ့သူကလက်ညှိုးထိုးရောင်း ရောင်းစားတဲ့သူသာငွေရတာပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်လါဘူး ဒီလေါက်အချောင်ရနေတဲ့အာဏာရူးလူတစုက တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့သူ ဘယ်သူမဆိုအမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်မယ် နောက်ဆုံးလုပ်ကြံဘို့လဲဝန်လေးမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြော့်ဒီလိုမသမာလူတစုမကောင်းမှု့အကြံအစည်မှန်သမျှသိရှိခဲ့ယင် သက်ဆိုင်သူများသို့အလျှင်အမြန်အသိပေးကြပါကာကွယ်ကြပါ….. ဒီအချိန်သည်အဏာရူးလူတစုကောင်းစားရေးမကူညီသင့်တော့ပါ အားလုံးသောပြည်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နောင်မျိုးဆက်သစ်များကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝိုင်းဝန်းအကာအကွယ်ပေးကြပါလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်… အားလုံးညီညွတ်ကြရအောင်……